Home News Madaxweeyne Farmaajo oo raali-Gelin ka bixiyay Dhiibistii Qalbi dhagax ka dib Kulan...
Madaxweeyne Farmaajo oo raali-Gelin ka bixiyay Dhiibistii Qalbi dhagax ka dib Kulan ka dhacay Asmara
Magaalada Asmara Ee dalka Eriteria Waxaa ku sugan Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C abdullaahi Farmaajo,waxaana uu la kulmay Xubno ka Socday Jabhada ONLF Iyagoo ka wadahadlay Arrimo dhowr ah oo ay ka mid aheed raali-gellinta Jabhada.
Sida aan xogta ku heleeyno Maxamed C abdullaahi Farmaajo ayaa codsaday in lala kulansiiyo Hogaamiyayaasha Jabhada si uu raali gelin uga bixiyo dhiibistii C/kariin sheikh muuse’’Qalbi dhagax’’
Maxamed Cumar Cusmaan oo ah Guddoomiyaha ONLF iyo Madaxweyne Maxamed C abdullaahi Farmaajo ayaa ku kulmay Magaalada Asmara Ee dalka Eriteria Sida uu Warbaahinta u sheegay .
Carabka ayuu ku adkeeyay in Farmaajo uu raali gelin ka siiyey dhiibistii Dowladda ee Qalbi-dhagax,isla markaana uu sheegay in ay ka xumaayeen in loo gacan geliyo Itoobiya,allase suura-geliyay in dib loosii daayo.
Kolkii Dowladda Itoobiya loo Gacan geliyay C/kariin sheikh Muuse’’QALBI DHAGAX’’ waxaa ay golaha wasiirada Xukumadda soomaalia isku raaceen in ONLF ay tahay Koox Argagaxiso taasna la ajligeedna ay u dhiibeen qalbi dhagax
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo Fursad 3-Bil ah S la siinaayo iyo Mucaaradka oo yiri’’Intaan ka badan ma Aamusnaan Karno!!
Next articleXildhibaan Cabdi barre Jabriil”Farmaajo Been ayuu u sheegay Soomaalida,waadna aragtaan waxyaabaha uu ku kacaayo,Shacabku Talaabo ha qaadaan’’
Xildhibaan Jeesoow oo afka furtay”Qaraxyada maxaa looga adkaan la’yahay”
Dowlada Turkiga ayaa diiday codsigii kaalmeynta daqliga dowladda Fedaraalka Somaliya